realme X7 Series ကို အိန္ဒိယမှာ ကြေညာဖို့ နီးနေပြီ – DigitalTimes
realme ဟာ တရုတ်မှာ စက်တင်ဘာလက X7 နဲ့ X7 Pro ကို ကြေညာခဲ့ပြီး အခုတော့ တရုတ် ပြင်ပမှာ ကြေညာဖို့ နီးစပ်နေပါပြီ။ အိန္ဒိယမှာလည်း ကြေညာဖို့ နီးစပ်နေပြီ ဖြစ်ပြီး ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှာ အစောဆုံး အနေနဲ့ ကြေညာနိုင်ပါတယ်။ အခုတော့ အိန္ဒိယက BIS မှာ သူတို့ကို မှတ်ပုံတင်လိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့
Specs နဲ့ တရုတ်က ရောင်း‌ဈေးကို ပြန်လည် လေ့လာကြည့်ရအောင်။
X7 မှာ ၆.၄၃ လက်မ FHD+ AMOLED မျက်နှာပြင်ပါလာပြီး Screen-to-body Ratio က ၉၀.၈ ရာခိုင်နှုန်း ရှိပါတယ်။ 32MP Punch Hole ကင်မရာကို အရှေ့ဘက်နဲ့ 64MP အပါအဝင် ကင်မရာ ၄ လုံးကို အနောက်ဘက်မှာ ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ 65W Super Dart Fast Charging က 4300mAh ဘက်ထရီကို ၃၃ မိနစ်နဲ့ အားအပြည့်သွင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ အနောက်ဘက်ကို ဖန်နဲ့ ဖုံးအုပ်ထားပြီး အရောင်ပြောင်းတဲ့ ဗားရှင်းလည်း ထွက်လာမှာပါ။
• 6.43-inch (2400 × 1080 pixels) Full HD+ 2.5D AMOLED display with Corning Gorilla Glass protection
• Octa Core (4 x 2.4GHz Cortex-A76 +4x 2GHz Cortex-A55 CPUs) MediaTek Dimensity 800U (MT6873V) 7nm processor
• 6GB / 8GB LPDDR4x RAM with 128GB (UFS 2.1) storage
• 64MP rear camera with LED flash, f/1.8 aperture, 8MP 119° Ultra Wide Lens with f/2.3 aperture, 2MP 4cm macro and 2MP depth sensor with f/2.4 aperture
• 32MP front-facing camera with f/2.5 aperture
• Super linear speakers, Hi-Res Audio
• Dimensions: 160.9×74.4×8.1mm; Weight: 175g
• 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS/GLONASS/Beidou, NFC, USB Type-C
• 4300mAh (typical) / 4200mAh (minimum) battery with 65W ultra-fast flash charging
• realme X7 6GB + 128GB — 1799 yuan (US$ 263 / Rs. 19,208 approx.)
• realme X7 8GB + 128GB — 2399 yuan (US$ 351 / Rs. 25,605 approx.)
၃ သိန်း ၅ သောင်းနဲ့ ၄ သိန်း ၆ သောင်းလောက် အသီးသီး ကျသင့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
X7 Pro မှာ ၆.၅၅ လက်မ Full HD+ 120Hz Samsung AMOLED မျက်နှာပြင် ထည့်သွင်းထားပြီး MediaTek Dimensity 1000+ 5G Chipset မောင်းနှင်ထားပါတယ်။ 32MP Punch Hole ကင်မရာကို အရှေ့ဘက်နဲ့ 64MP , 8MP Ultrawide, 2MP Portrait , 2MP Macro ကင်မရာတွေကို အနောက်ဘက်မှာ တပ်ဆင်ထားပါတယ်။
4500mAh ဘက်ထရီနဲ့ 65W Super Dart Fast Charging တွေ ပါလာပြီး ၃၅ မိနစ်အတွင်းမှာ ၀ ကနေ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း အားသွင်းပေးနိုင်ပါတယ်။
• 6.55-inch (2400 × 1080 pixels) Full HD+ 2.5D 120Hz AMOLED display, 1200 nits brightness, Corning Gorilla Glass5protection
• 8GB LPDDR4x RAM with 128GB / 256GB (UFS 2.1) storage
• 64MP rear camera with LED flash, f/1.8 aperture, Sony IMX686 sensor, 8MP 119° Ultra Wide Lens with f/2.25 aperture, 2MP retro portrait lens and 2MP 4cm macro lens with f/2.4 aperture
• 32MP front-facing camera with f/2.45 aperture
• Super linear Stereo speakers, Dolby Atmos, Hi-Res Audio
• Dimensions: 160.8×75.1×8.5mm; Weight: 184g
• 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi6802.11 ax, Bluetooth 5, GPS (L1 + L5)/GLONASS/Beidou, NFC, USB Type-C
• 4500mAh (typical) / 4400mAh (minimum) battery with 65W ultra-fast flash charging
• realme X7 Pro 6GB + 128GB — 2199 yuan (US$ 322 / Rs. 23,470 approx.)
• realme X7 Pro 8GB + 128GB — 2499 yuan (US$ 366 / Rs. 26,685 approx.)
• realme X7 Pro 8GB + 256GB — 3199 yuan (US$ 469 / Rs. 34,160 approx.)
တန်ဖိုးအနည်းဆုံး မော်ဒယ်ဟာ ၄ သိန်း ၂ သောင်းလောက် ရှိပါတယ်။
Huawei P40 Pro အတွက် Aurora Green အရောင် ထွက်လာနိုင်